Sale & Marketing Executive Archives - Glory Assumption Space
Sales & Marketing Executive – Male - (5) Posts /လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ်
၁) Sales & Marketing Executive – Male - (5) Posts /လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ်/ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ။ • ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ • Medical ပိုင်းဖြင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ရှိသူဦးစားပေးမည်။ • Sales & Marketing နှင့်ပတ်သက်သည့် Diploma ရရှိထားသူဖြစ်ရ မည်။ • အပြင်သွားလာနိုင်ရမည်။ • သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေ့အကြုံ ( ၃ ) နှစ်ရှိရမည်။ • အလုပ်ချိန် မနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီအထိတာဝန်ထမ်းဆောင် ရပါမည်။ • တနင်္ဂနွေနှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် တွင်ရှိသော ဓါတ်ခွဲခန်းကုမ္ပဏီကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါ ရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါ ရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales & Marketing Executive – Male/Female - (5) Posts / လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနိုင်း ) / တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်
Sales & Marketing Executive – Male/Female - (5) Posts / လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနိုင်း ) / တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ။ • သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ( ၃ ) နှစ်ရှိသူဖြစ်ရမည် ။ • ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည် ။ • အထည်အလိပ်ဖြန့်ချိသည့် အပိုင်းတွင်ကျွမ်းကျင်စွာလုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည် ။ • အသက် ( ၃၀ ) နှစ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ရမည် ။ • ရုပ်ရည်ပြေပြစ်သူဖြစ်ရမည် ။ • Computer အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည် ။ • ရုပ်ရည်ပြေပြစ်သူဖြစ်ရမည် ။ • ယူနီဖောင်းရှိသည် ။ • အလုပ်ချိန်မနက် ၉း၀၀ နာရီမှ ညနေ ၅း၃၀ နာရီအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ • တနင်္ဂနွေ နှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည် ။ • တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ Fashion Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ GAS Recruitment နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ Fashion Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အထက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales & Marketing Executive – Male/Female - (5) Posts / လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနိုင်း ) / တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်
Sales & Marketing Executive – Male/Female - (5) Posts / လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနိုင်း ) / တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ။ • သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြူံ ( ၃ ) နှစ်ရှိသူဖြစ်ရမည် ။ • ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည် ။ • Event ပိုင်းတွင်ကျွမ်းကျင်စွာလုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည် ။ • အသက် ( ၃၀ ) နှစ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ရမည် ။ • ရုပ်ရည်ပြေပြစ်သူဖြစ်ရမည် ။ • Computer အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည် ။ • ရုပ်ရည်ပြေပြစ်သူဖြစ်ရမည် ။ • ယူနီဖောင်းရှိသည် ။ • အလုပ်ချိန်မနက် ၉း၀၀ နာရီမှ ညနေ ၅း၃၀ နာရီအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ • တနင်္ဂနွေ နှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည် ။ • တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ Media & Advertising Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ GAS Recruitment နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ Media & Advertising Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အထက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales & Marketing Supervisor – Female - (5) Posts / လစာ - ၃၅၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း
ချက်ချင်းအင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ ၁ ) Sales & Marketing Supervisor – Female - (5) Posts / လစာ - ၃၅၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း)/ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်။ - တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ - Fashion အရောင်းပိုင်းဖြင့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၃)နှစ် အထက်ရှိရမည်။ - Computer ( Word,Excel) ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - အသက် (၃၀)နှစ်ဝန်းကျင် ဖြစ်ရမည်။ - ရုပ်ရည်ချောမောပြေပြစ်ရမည်။ တာဝန်ယူလိုစိတ်အပြည့်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ - အလုပ်ချိန် မနက် ၉:၀၀ မှ ညနေ ၅:၃၀ အထိတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ - တနင်္ဂနွေနှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။ - မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်တွင်ရှိသော Fashion Company တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်တွင်ရှိသော Fashion Company တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည်။ ချက်ချင်း အင်တာဗျူးဝင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ ) [caption id="attachment_2237" align="alignnone" width="569"] Concept image of Sales & Marketing onasignpost againstamodern glass office building.[/caption]
၁) Sales and Marketing Executive – Male / Female - ( 15 ) Posts / လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ကျပ် - ၃၅၀,၀၀၀ ကျပ် / မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။
၁) Sales and Marketing Executive – Male / Female - ( 15 ) Posts / လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် - ၃၅၀,၀၀၀ ကျပ် / မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ (အင်တာဗျူး အမြန်ဝင်ရမည်။) (4 star hotel ကြီးမှ ခေါ်ယူသောတိုက်ရိုက်အင်တာဗျူးအမြန်ဝင်ရမည်။) • Hotel Field (သို့) Travel and Tour Sales and Marketing လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၃) နှစ်ရှိရမည်။ • တက္ကသိုလ်တခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ •Sales and Marketing Diploma or Certificate တခုခုရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ •English စာကျွမ်းကျင်စွာ ပြောဆိုနိုင်ရမည်။ • အလုပ်ချိန် (9:00AM to 5:30PM) • တနင်္ဂနွေနှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်ပိတ်သည်။ • လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည် ။ •မရမ်းကုန်းမြို့နယ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ •4Star Hotel ကြီး တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ လျှောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါ တည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr4@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကေ်ာင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales & Marketing Executive – Female (5)Posts /လစာ - ၂၅၀,၀၀၀~ ၄၅၀,၀၀၀ ကျပ်
Salary Rang : 250000 ~ 450000
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Construction Material Distribution Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါ ၀န်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 1. Sales & Marketing Executive – Female (5)Posts /လစာ - ၂၅၀,၀၀၀~ ၄၅၀,၀၀၀ ကျပ်/ဗဟန်းမြို့နယ်။
- ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - သွက်သွက်လက်လက်စကားပြောနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - Construction Material များဖြစ်တဲ့ သံချောင်းနှင့်ရေပိုက်များရောင်းသည့်အတွေ့အကြုံ ရှိသူဖြစ်ရမည်။ - စနေ၊တနင်္ဂနွေပိတ်သည်။ အလုပ်ချိန် မနက် ၈ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com,gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09977397705, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ –ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင်ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales & Marketing Executive - Male (5)Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောDistribution Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ စနေနေ့တပတ်ခြားပိတ်သည်။ Sales & Marketing Executive - Male (5)Posts /လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ်/မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။ - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၃)နှစ်ရှိရမည်။ - တခါတရံနယ်သွားနိုင်ရမည်။ - Sales & Marketing ပိုင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် Certificate (or)Diploma ရရှိထားသူဦးစားပေးမည်။
Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09977397705, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ –ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင်ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sale & Marketing Executive - F/M (5)posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ် ရှိ Travel & Tours တွင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလို ရှိသည်။ 1. Sale & Marketing Executive - F/M (5)posts / လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ်/ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်။ - ဘွဲ့ ရ ဖြစ်ရမည် ။ - ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူ ဦးစားပေးမည်။ - English4skills ပိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးစဉ် လက်မှတ်များကို sale plan ကောင်းကောင်းဖြင့်စီစဉ်ရောင်းချနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - Computer ကျွမ်းကျင် စွာအသုံးပြုတတ်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223783, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ –ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင်ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ ) [caption id="attachment_2852" align="alignnone" width="450"] 60631694 - we are hiring jobs, job working recruitment employment business concept employees career hand with megaphone[/caption]
Sales & Marketing Executive – Male (5) Posts /လစာ- ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ်+++
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Manufacturing Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 1. Sales & Marketing Executive – Male (5) Posts /လစာ- ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ်+++ /ရွှေပြည်သာမြို့နယ်။
- ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - FMCG ပိုင်းဖြင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၂)နှစ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ - Computer Excel သုံးနိုင်ရမည်။ - အသက် ၂၈ နှစ်အထက်ဖြစ်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223783, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sale&Marketing Executive - Male - (1) Post
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Painting Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 3.Sale&Marketing Executive - Male - (1) Post / လစာ - ညှိနှိုင်း / သင်္ကန်းကျွန်းမြို့ နယ်။ - Painting ပိုင်းနှင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်ဖူးသူ ဦးစားပေးမည် ။ - Sale ပိုင်းအတွေ့အကြုံရှိရမည် ။ - အရှေ့ဒဂုံနီးသူ ဦးစားပေးမည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 262555437 , 09 262223785, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223783, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ အင်းစိန်လမ်းမကြီး )
Sales and Marketing Executive - Female / Male (5) Posts/လစာ- ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ်/လှိုင်သာယာမြို့နယ်
1.Sales and Marketing Executive - Female/Male (5) Posts / လစာ- ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် (အထက်)/ လှိုင်သာယာမြို့နယ်။ - Bachelor or advanced degree in business or related fields - Minimum3Years experience in Sales and Marketing field.Perferable from fashion or garment background - Strong analytical , communication , integrity selling and collaborative leadership skills - Language Skill : Chinese and English is musta(4) Skill.Strong writing and verbal communication skill - Excellent skills in selling and customer’s realationships and problem solving - Preferably in possession of own transportation and ability to travel independently (Transport allowance will be provided) - Ability to work in Hlaing Thar Yar Industrial Zone (Transport allowance will be provided) [caption id="attachment_2237" align="alignnone" width="569"] Concept image of Sales & Marketing onasignpost againstamodern glass office building.[/caption]
Sales & Marketing Executive – Male/Female (5 Posts) / ၄သိန်း(အထက်) /သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်
မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Companyကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ Sales & Marketing Executive – Male/Female (5 Posts) / ၄သိန်း(အထက်) /သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် •	တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ •	Electronic နှင့်ပတ်သက်သည့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ့အနည်းဆုံး (၃)နှစ်ရှိရမည်။ •	အသက် ၂၀ နှင့် ၃၀ ကြားရှိရမည်။ •	အင်္ဂလိပ်စကား အသင့်အတင့်ပြောနိုင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ Viber ဖြင့်လည်းကောင်း ၊လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်းမှတ်တိုင်(အင်းစိန်လမ်းမကြီး) ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Sales & Marketing Executive – Male –5Posts / လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် / ဒေါပုံမြို့နယ်
မင်္ဂလာပါရှင်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ဒေါပုံမြို့နယ်တွင်ရှိသော Distribution ကုမ္ပဏီကြီးတွင် အောက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်လိုအပ်နေပါသည်။ . Sales & Marketing Executive – Male –5Posts / လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် / ဒေါပုံမြို့နယ် • ဘွဲ့ရ (သ်ို့) အခြေခံပညာအထက်တန်းအောင် • အသက် ၃၀နှစ်အောက် • FMCG အတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး(၂)နှစ်အထက်ရှိရမည်။ • လူမှုဆက်ဆံရေးအထူးကောင်းမွန်ရမည်။ • ကွန်ပျူတာအခြေခံတတ်ကျွမ်းရမည်။ • ရန်ကုန်မြို့နယ် ကော့မှူး၊ တွံတေးရွာများသို့သွားလာနိုင်ရမည်။ • Mortor cycle ကျွမ်းကျင်စွာမောင်းနိုင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ Viber ဖြင့်လည်းကောင်း ၊လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr4@gmail.com -, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com ,gasrecruit.hr7@gmail.com, Phone No.- 09 262223783 ,09-262223784 , 09 977397705 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်းမှတ်တိုင် အင်းစိန်လမ်းမကြီး ကမာရွတ်မြို့နယ်။
မင်္ဂလာပါရှင်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ဒေါပုံမြို့နယ်တွင်ရှိသော Distribution ကုမ္ပဏီကြီးတွင် အောက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်လိုအပ်နေပါသည်။ Sales & Marketing Executive – Male –5Posts / လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် / ဒေါပုံမြို့နယ် •	ဘွဲ့ရ (သ်ို့) အခြေခံပညာအထက်တန်းအောင် •	အသက် ၃၀နှစ်အောက် •	FMCG အတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး(၂)နှစ်အထက်ရှိရမည်။ •	လူမှုဆက်ဆံရေးအထူးကောင်းမွန်ရမည်။ •	ကွန်ပျူတာအခြေခံတတ်ကျွမ်းရမည်။ •	ရန်ကုန်မြို့နယ် ကော့မှူး၊ တွံတေးရွာများသို့သွားလာနိုင်ရမည်။ •	Mortor cycle ကျွမ်းကျင်စွာမောင်းနိုင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ Viber ဖြင့်လည်းကောင်း ၊လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr4@gmail.com -, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com ,gasrecruit.hr7@gmail.com, Phone No.- 09 262223783 ,09-262223784 , 09 977397705 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်းမှတ်တိုင် အင်းစိန်လမ်းမကြီး ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Sales and Marketing Executive - Female/Male (5) Posts
Sales and Marketing Executive – Female/Male(5)Posts/Salary- 600,000 Kyats (above)/Hlaing Thar Yar Township. - Bachelor’s or advanced Degree in business or related fields. - Minimum3years experiences in Sales & Marketing field. Preferable from fashion or garment background. -Strong analytical, communication, integrity selling and collaborative leadership skills . -Language Skills: Chinese and English isamust (4 skills). Strong written and verbal communications skills. -Ability to multi-task & prioritize work independently under pressure, within cross-functional teams. -Excellent presentation skill. -Analytical approach to problem-solving and opportunity analysis -Excellent skills in selling and customer's relationships and problem solving. -Preferably in possession of own transportation & ability to travel independently (Transport allowance will be provided) -Ability to work at Hlaing Thar Yar Industrial Zone (1) (*Transport allowance will be provided )